मधुमेह अर्थात चिनी रोग लागेको कसरी थाहा पाउने ? रोग लागेपछी के गर्ने ?हेर्नुहोस् भिडियो – kollywood hungama
मधुमेह अर्थात चिनी रोग लागेको कसरी थाहा पाउने ? रोग लागेपछी के गर्ने ?हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं।मधुमेह अर्थात डाइबेटिसलाई सामान्यभाषामा चिनिको रोग भन्ने गरिन्छ । रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढि भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । प्यांक्रियाज नामक ग्रन्थिबाट उत्पादन हुन् । इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुदा मधुमेह हुन जान्छ ।
रगत विना रक्तसंचार प्रणालीको कल्पना गर्न सकिदैन । पानी , रक्तकोष , विभिन्न लवण तथा रसायनहरुको समिश्रणबाट बनेको रगतमा तत् तत् पदार्थहरु निश्चित अनुपातमा रहेका हुन्छन् ।आज हामीले मधुमेयको बारेमा वरिष्ठ मधुमेय थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा. तारा कोइरालासंग कुराकानी गरेका छौँ । हेर्नुहोस यो कुराकानी :
Previous तपाईको स्वस्थ जिवनसँग सम्बन्धित कुरा,म २७ बर्षिया महिला मेरो श्रीमानको यौन शक्ति कम छ, के गर्ने होला ?यस्तो छ डाक्टरको सुझाव